१. कठै मेरो देश, जहाँ भोको पेटले खान माँग्दा दिनुको सट्टा यसरी डण्डा ठोकेर नाबालक पिट्ने राक्षसहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? अनि ठूला ठूला नौटन्की कुरा गर्दै डलरको खेती गर्ने मानब अधिकारबादी र बालबालिका अधिकारकर्मी भनाउँदा टेम्पुरेहरु खोइ कहाँ गएका छन् ? तीन एकपटक यो तस्बिरलाई निहाल्नुहोस् जुन मैले फेसबूकमा भेट्टाएर शेयर गरी दिएको छु र अरुले पनि शेयर गरी दिनुहोला ।
योभन्दा गैरजिम्मेवार शासन अरु के हुनसक्छ ? प्रहरीलाई बालबालिकामाथि कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि सिकाइएको रहेनछ । यो त हिटलरी शैली भएन र भनेको ?
२. कठै, संघियतामा रुपान्तिरित मेरो देशको न्यायपालिका गजब्बकै रहेछ भन्ने कुरो न्यायपरिषद्को सचिवको यौटा पत्रले प्रधानन्यायाधीशको जागीरै चट पारिदियो । संवैधानिक अंग के भन्नु, एउटा कर्मचारको पत्रले ध्वस्त पार्नेरहेछ ।
३. हरे, नेपालको कानुन, र यो कसैको हातमा नबाँधिंने हतकडी । भ्रष्टाचार भयो भनेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न अदालत लग्यो, धरौटीमा छुट्छ । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ठगिएको, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा धरौटी । एनसेलले ३३ अर्व राष्ट्रलाई नतिरेको होस् अथवा राजस्वका कर्मचारीले घूस खाएर राजस्व चुहावट गरेको, माफी दिएको विषय होस्, सबका सबमा धरौटीको खेल ।
बिरबल र इरानी राजाको एउटा कथा यस्तो छ
राजा अकबरका सल्लाहकार बिरबलको चातुर्यताको बारेमा सबैले गुणगान गाएको सुनेर इरानका राजालाई बिरबललाई भेट्न मन लाग्यो । उनले भेट्ने मात्र होइन, उनको चातुर्यताको परिक्षण गर्ने पनि निधो गरे । इरानी राजाका सिपाहीहरु बिरबल कहाँ गएर राजाको निमन्त्रणा दिएपछि बिरबल राजाकहाँ हाजिर भए ।
दरबारभित्र पसेपछि बिरबल आश्चर्य परे । किनकी त्यहाँ एकजना होइन, छ जना राजाहरु थिए । उनले बुझिहाले कि उनको परिक्षण हुँदै छ । उनले ती छ मध्येबाट असली राजालाई चिन्नुपर्ने थियो । बिरबलले सबै राजाहरुलाई नियाले । साँझको समय थियो, अर्को दिन वार्तालाप गर्ने कुरा भयो र उनी सुत्न गए ।
बिरबलले बिहानै उठेर राजालाई अभिवादन गरे । राजा छक्क परे, उनले सोधे– तिमीले म नै राजा हूँ भन्ने कसरी पत्ता लगायौ ?
बिरबलले उत्तर दिए, महाराज हिजो म आएपछिका गतिविधि नियाल्दा राजा भएका अरु पाँच जनाले तपाईंलाई बेला–बेलामा हेरिरहन्थे । तर, तपाईं भने आफ्नो अगाडी हेर्नुहुन्थ्यो र तपाईंको शारीरिक हाउभाउ आत्मविश्वासी देखिन्थ्यो ।
निश्कर्ष : जो व्यक्तिले अरुको नक्कल गरेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई डर भैरहन्छ । जो व्यक्तिले अरुको नक्कल गरेको छैन, उसमा आत्मविश्वास हुन्छ ।